Gịnị bụ okpomọkụ pịa igwe? Igwe ihe igwe na-ekpo ọkụ (ma ọ bụ "igwe na-ebufe ọkụ") na-enyefe usoro ma ọ bụ atụmatụ maka ihe dịka T-shirts, pad òké, ọkọlọtọ, akpa aka, iko, okpu, wdg site na oge, ọnọdụ okpomọkụ, na nrụgide. Ejiri igwe kpo oku kpo oku ...
Maka ịpị ọkụ, a na-eji usoro nhazi nke nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ eme ihe. Mgbe mgbe, a na-etinye nrụgide ahụ mgbe ụfọdụ ihe ọkụkụ emeela n'ihi na itinye nrụgide na obere okpomọkụ nwere ike ịnwe mmetụta na-adịghị mma na akụkụ na ngwa ọrụ. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị ọtụtụ narị ogo ...
Okwu Mmalite nke uru, ọghọm ya na ihe ngosipụta nke igwe na-ekpo ọkụ na ọkụ isostatic na-ekpo ọkụ
Kedu uru na ọghọm nke usoro kpo oku nke igwe na-ekpo ọkụ? Na mgbakwunye, gịnị bụ njirimara teknụzụ izugbe na igwe ọkụ? Okwu abụọ a dị n'elu bụ ihe anyị ga-aghọta, n'ihi na ha nwere njikọ chiri anya na igwe ọkụ, ya mere ha dị ezigbo mkpa. Ndị na-ekpo ọkụ ...